नेफ्स्कूनका ‘फ्रन्टलाइनर’ हरु :: Sahakari Akhabar
नेफ्स्कूनका ‘फ्रन्टलाइनर’ हरु
२०७७ जेष्ठ २४ गते , शनिवार Sahakari Akhabar
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका बीच नेपाल सरकारले लडकाउन घोषणा गरेको आज ७५ औं दिन पुगेको छ । यसबीचमा विभिन्न समस्याहरु सामना गर्दै वित्तीय सहकारीकर्मीहरु कर्म क्षेत्रमा होमिएका छन् । सदस्यको आवश्यकता र चाहनालाई शिरमा राखी फ्रन्टलाइनमा रहेर अहोरात्र खटिएका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि (नेफ्स्कून) अन्तर्गत सातै प्रदेशका फिल्ड कार्यालय प्रमुखहरुको सक्रियताबारे सहकारी अखबारमार्फत जानकारी गराउने प्रयास गरिएको छ । यसकालागि रञ्जनमणि पौड्यालले तयार गरेको सारसंक्षेपः
‘कृषि र प्रविधिमा जोडिन सिकायो’
फिल्ड इन्चार्ज, डडेल्धुरा, सुुदुर पश्चिम प्रदेश
२०४१ साल चैत्र २० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. २ मा जन्मिनुभएका चन्द्रदेव जोशी हाल श्रीमती, एक छोरी र एक छोरासँग डडेल्धुरामा बस्दै आउनुभएको छ । १३ वर्षको सहकारी अनुभवका धनी जोशीको स्थायी घर पनि जन्मस्थानमै रहेको छ । बन्दाबन्दीको समयमा कार्यालयीय काममा खटिदा परिवारको एकदमै राम्रो साथ र सहयोग रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कार्यालयमा रहँदा र घर फर्केपछि व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान पुर्याउन श्रीमती र छोरीले विशेष सहयोग गरेकोमा जोशी उहाँहरुप्रति बिशेष आभारी हुनुहुन्छ । नेफ्स्कून डडेल्धुरा फिल्ड कार्यालय अन्तर्गत हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत ७ पहाडी जिल्लाका ८० साकोस सदस्य छन् ।
फिल्ड कार्यालय अन्तर्गतका संस्थाहरुसँग नियमित फोन र मेसेन्जरबाट सम्पर्क र त्यस अनुरुप सेवा व्यबस्थापन भैरहेको छ । सदस्य साकोसहरुको कार्य सञ्चालन, बचत फिर्ता, ऋण लगानी, बन्दाबन्दीको प्रभाव लगायत विषयमा दैनिक जानकारी लिने गरेका छौं । संस्थाहरुको आवश्यकताको आधारमा उहाँहरुलाई सबै किसिमको सेवा र सल्लाह प्रदान गरेका छौं । कार्यालयको आन्तरिक कामको अतिरिक्त केन्द्रीय कार्यालयबाट सञ्चालन गरिएका भर्चुअल तालिम र शिक्षाका कार्यक्रमसँग पनि जोडिएका छौं ।
लकडाउन सुरु भए पछि १६ दिन पूर्ण रुपमा कार्यालय बन्द गर्नुपर्यो। यद्यपि, विभिन्न माध्यमबाट सदस्य संस्थाहरुसँग सम्पर्कमा भने थियौं । त्यसपछि कार्यालय खोल्दा पनि साबुन पानी, मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा आदिको प्रयोगसँगै भौतिक दूरी कायम गर्दै निक्कै सावधानीपूर्वक दैनिक १० बजेदेखि २ बजे सम्म सेवा प्रदान गरेका छौं । सदस्य संस्थाबाट माग भएको अवस्थामा जुनसुकै समय पनि सेवा प्रदान गरेका छौं । यस विषयमा सदस्य संस्थाहरुलाई पनि जानकारी गराएका छौं । अब खाताबन्दीको समयपनि नजिकिएकोले संस्थाहरुसँग फोन मार्फत ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको तयारीका विषयमा जानकारी लिएका छौं । साकोसहरुबाट प्राप्त ब्याज र किस्ता रकमलाई सफ्टवेयरमा प्रविष्टी गर्ने काम भैरहेको छ ।
नेफ्स्कूनले सदस्य संस्थाहरु लक्षित जारी गरेको मार्गनिर्देशनको बारेमा जानकारी लिई यहाँका संस्थामा पनि लागू गर्न प्रेरित गर्नुका साथै कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, ऋण किस्ता र ब्याज असुली, बचत फिर्ता आदि सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी प्रदान गरेका छौं । नेफ्स्कूनबाट सञ्चालन भैरहकेका अनलाईन तालिमहरुबाट धेरै जानकारी प्राप्त भएको भन्दै सदस्यहरुले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ ।
डडेल्धुरा फिल्ड कार्यालयमा २ जना मात्र कर्मचारी छौं । सहकर्मी साथीलाई कामको आवश्यकताको आधारमा बोलाउने र बाँकी समयमा घरबाटै काम गर्ने वातावरण मिलाएको छु । डडेल्धुरा फिल्ड कार्यालय पहाडी जिल्ला रहेकोले कार्यालय सञ्चालन खासै समस्या भएको छैन । स्थानीय गाउँ स्तरमा संस्थाहरु रहेका कारण नेफ्स्कूनका सदस्य संस्थाहरुले पनि आफ्ना सदस्यहरुबाट बचत फिर्ताको माग खासै नभएकोले सेवा निरन्तरतामा समस्या नदेखिएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
सदस्य र कर्मचारीहरुको सुरक्षाका लागि कार्यालयमा आउँदा साबुन पानीले हातधुने र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौं । सदस्य र कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा आउँदा अनिवार्य रुपमा मास्क लगाएर आउनका लागि जानकारी गराएका छौं । यो बन्दाबन्दीले सहकारीलाई कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी ऋण लगानीलाई बढी प्राथमिकता दिन, संस्थामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न र सदस्यहरुलाई पनि समय अनुसार प्रविधिमुखी बन्न सिकाएको छ । हामीसँग तरलता अधिक रहेको स्थिति छ । बन्दाबन्दी सुरु भए पछि माग भएपनि ऋण लगानी गर्न सकिएको छ ।
बन्दाबन्दीमा सहकारीको भूमिका अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा एकदमै अतुलनीय रहेको छ । सदस्यहरुले सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याजमा बन्दाबन्दीको समयमा छुट पाउँदा र हर्जाना नलिदा धेरै राहत महसुस गरेका छन् । स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेकोले अति आवश्यक संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीहरुलाई फोन गरी बचत फिर्ता गर्दा र सानो तिनो काम चलाउन ऋण पाउँदा एकदम खुशी भएको पायौं ।
‘सदस्यको तरलता सर्भे गर्यौं’
- छत्रप्रसाद धमला
फिल्ड इन्चार्ज, सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश
२०४९ साल चैत २ गते अछामको तुर्माखाद गा.प ८ मा जन्मिनुभएका छत्रप्रसाद धमला हाल श्रमती र २ भाइ सहित सुर्खेतमा बस्दै आउनुभएको छ । ८ वर्षको सहकारी अनुभव बोक्नुभएका धमला बन्दाबन्दीको समयमा काम गर्दा परिवारबाट राम्रो साथ र सहयोग पाएको बताउनुहुन्छ । नेफ्स्कून सुर्खेत फिल्ड कार्यालय अन्तर्गत हाल कर्णाली प्रदेशका ९२ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सदस्य छन्
चैत ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था भएन । यद्यपि, फोन र अन्य माध्यमबाट सदस्य संस्थाहरुको अवस्थाका बारेमा यथेष्ट जानकारी लिने काम गर्यौं। त्यसपछि पनि हामीले सदस्यहरुसँग सम्पर्कको माध्यमबाट उहाँहरुको आवश्यकता अनुरुप कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ ।
अहिले सुर्खेत फिल्ड कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरु आलोपालो काम गरिरहेका छौं । घर बस्नेले पनि तोकिएको कार्यालयको काम गर्ने व्यबस्था मिलाएका छौं । केन्द्रीय कार्यालयबाट आएको निर्देशन अनुरुप काम गरिरहका छौं । आवश्यक पर्दा थप सल्लाह सुझाव पनि लिएर सेवा निरन्तरता दिइरहेका छौं । यहाँ हामीलाई स्थानीय प्रशासनबाट त्यस्तो अवरोध नभएपनि मानिसहरुमा कोरोनाको डर र त्रासका कारण भौतिक गतिविधि कमी आएको जस्तो मलाई लाग्छ ।
कार्यालय सञ्चालन गर्दा पनि व्यक्तिगत र कार्यालयीय स्वास्थ्यलाई बिशेष ध्यानमा राख्दै साबुन पानीले हात धुने, अनिवार्य मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर र पन्जा प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, नगदलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर प्रयोग गर्ने जस्ता विधि अपनाएका छौं ।
यसबीच हामीले ९० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य संस्थाको तरलता सर्भे ग¥यौं । उहाँहरुलाई वित्तीय र स्वास्थ्य परामर्श प्रदान ग¥यौं । साथै सदस्य संस्थाका व्यबस्थापकहरुसँग भर्चुअल छलफल पनि ग¥यौं । यसले सदस्यहरु माझ नेफ्स्कूनको छवि उजिल्याउने काम गरेको छ । हाम्रो सेवाबाट सदस्यहरु धेरै खुसी भएको पाए । अहिले हामीसँग बचत पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अब नयाँ ऋण सेवाहरु विकास गरेर लगानी बढाउने योजना अघि बढाएका छौं । बन्दाबन्दीले हामीलाई कृषि र प्रविधिमा बिशेष जोड दिन सिकाएको जस्तो मलाई लाग्छ ।
‘चुनौतीका बीच प्रशंसा’
-यम बहादुर डाँगी
फिल्ड इन्चार्ज, नेपालगञ्ज, प्रदेश नं ५
२०४६ साल जेठ ९ गते बर्दिया जिल्लाको बेलवा–९ मा जन्मिनुभएका यम बहादुर डाँगी बुवा, आमा, श्रीमती र एक छोरी सहित नेपालगञ्जमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँको स्थायी बसोबास बाँकेको नेपालगञ्जस्थित काँरकादौ–१८ मा रहेको छ । २०६७ सालदेखि ४ वर्ष होलिका सहकारी र त्यस यता २०७१ सालदेखि नेफ्स्कूनमा हालसम्म गरी डाँगीले १ दशकको सहकारी यात्रा पूरा गरिसक्नुभएको छ । उहाँले हेर्ने नेपालगञ्ज फिल्ड कार्यालय अन्तर्गत हाल ७३ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सदस्य छन् ।
बन्दाबन्दीमा कार्यालयमा भौतिक उपस्थित भएर वा सदस्य संस्थामा गएर सुरक्षित काम गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा परिवार जानकार रहेका कारण सुरक्षित विधि अपनाएर काम गर्दा उहाँहरुबाट राम्रो साथ र सहयोग पाएको छु । चैत्र ११ गते देखि १ साता घरबाटै सदस्य संस्था र सहकारीकर्मीसँग समन्वय तथा सम्पर्क कायम गर्यौं ।
लकडाउन लम्बिदै जाँदा सदस्य संस्थाको आवश्यकता तथा सम्पर्कको आधारमा हप्तामा २ दिन (२ देखि ३ घण्टा) नेफ्स्कून फिल्ड कार्यालय खोली वित्तिय कारोबार सुचारु ग¥यौं । खुला सिमाना तथा व्यापारिक केन्द्र हुनुका साथै अन्य जिल्ला भन्दा नेपालगञ्जमा कोभिड–१९ को संक्रमण अत्यधिक वृद्धि भएका कारण बीचमा पुनः स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकाले एक हप्ता कार्यालय बन्द गरी अभौतिक सम्पर्कमा सीमित रहनुपर्यो। त्यस यता भने दैनिक बिहान १० बेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म कार्यालय खोलेको अवस्था छ । कार्यालयमा साबुन पानी, स्यानिटाइजर, मास्क, पन्जा आदि साम्रागी प्रयोगमा ल्याएका छौं । सम्भव भएसम्म आलोपालो नभएको अबस्थामा म एक्लैले पनि काम चलाएको छु ।
अहिले पनि सदस्य केन्द्रित भई आवश्यकता अनुरुप कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । कोरोनाको हटस्पट नै बनेका कारण निक्कै चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको छ । यद्यपि, नियमित सम्पर्क र समन्वयको आधारमा वित्तीय सेवा प्रदान गरेका कारण सदस्यहरु हाम्रो सेवाबाट खुसी हुनुहुन्छ । बजारमा जान, संस्थाहरु भ्रमण गर्ने परिस्थिति नभएका कारण व्यवसाय वृद्धिमा असर परेको छ, तरलताको पनि कमी छ । बैंकबाट नगद झिक्न पनि समस्या छ ।
देश नै लकडाउनमा भएकोले ऋण लगानी तथा निक्षेप संकलन लगायतका वित्तीय कारोबारमा असहजताको अवस्था पक्कै छ । बन्दाबन्दीले सहकारीलाई प्रविधिमार्फत काम गर्न सिकायो भने थप प्रविधिकरणको आवश्यकता पनि पुष्टि गरेको छ । संकटमा सहकारी आवश्यक रहेको समुदायलाई लागेको छ । असहज परिस्थितिमा पनि सहज वित्तिय सेवा पुर्याउनेसहकारीको उदाहरणीय भूमिकाको अहिले यहाँ प्रशंसा भएको छ ।
‘समुदायमा सहकारी साख वृद्धि’
फिल्ड इन्चार्ज, पोखरा, गण्डकी प्रदेश
२०४२ साल असोज ४ गते मोरङको विराटनगरमा जन्मनुभएका रिसभ राज रेग्मी बन्दाबन्दीमा पोखरामा एक्लै हुनुहुन्छ । महामारीको सन्त्रासमा कार्यालयीय काम गर्नु पर्दा पनि काठमाडौंमा रहेको परिवारबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएको बताउने रेग्मी सहकारी क्षेत्रमा नवप्रवेशी हुनुहुन्छ । ६ महिना अघिबाट उहाँ नेफ्स्कून पोखरा फिल्ड कार्यालय इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ । नेफ्स्कून फिल्ड कार्यालय पोखरा, कास्की अन्तर्गत हाल २ सय ५७ सदस्य संस्था छन् ।
बन्दाबन्दीको सुरुवाती दिन चैत ११ गतेदेखि २६ गतेसम्म भौतिक रुपमा कार्यालय सञ्चालन हुन नसकेपनि केही दिन पछि सदस्य संस्थाको माग बमोजिम फोन सम्पर्कको आधारमा बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म दैनिक कार्यालय संचालनमा गरिरहेका छौं । बन्दको समयमा पनि हामी नियमित रुपमा अभौतिक सम्पर्कमा भने रह्यौं । म र लक्ष्मण प्रसाद अधिकारी कार्यालय नजिकै बस्ने भएकाले दैनिक जसो र अन्य कर्मचारी भने आवश्यकतामा आधारमा कार्यालयमै रह्यौं । सदस्य संस्थाहरुको माग बमोजिम कार्यालय खोलेका कारण उहाँहरु नेफ्स्कूनप्रति अत्यन्त सकारात्मक पायौं । यो बन्दाबन्दीले सुख दुःखको साथी भनेकै सहकारी रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई सिकाएको पायौं । त्यसैगरी, अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारीमार्फत सहज र सजिलै कारोबार गर्न सकेका कारण समुदायमा यसको साख बढेको पायौं ।
कार्यालय सञ्चालनमा हामीले १ मिटरको भौतिक दूरी कायम गरी मास्क, स्यानिटाइजर र पन्जा लगाएर मात्रै सेवा लिने र दिने काम गरेका छौं । हामीले सुरक्षित विधि अपनाएर सेवा प्रवाह गरेपनि बैंकहरु नखुलेका कारण चेक तथा नगद जम्मा गर्न समस्या भएको छ । परिस्थितिका कारण पनि हुन सक्छ, ऋण लगानी कमी भएका कारण हामीसँग तरलता केही अधिक रहेको अवस्था छ ।
‘बचत वृद्धि र ऋण असुली राम्रो’
- यमकला सुवेदी
फिल्ड इन्चार्ज, चितवन, वागमती प्रदेश
२०३३ साल असार २९ गते भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १२ पोखरेली टोल चितवनमा जन्मिनुभएकी यमकला सुवेदी हाल श्रीमान २ छोरी र १ छोरा सहित भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ९ हाकिमचोक, चितवनमा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । १५ वर्षको लामो सहकारी अनुभव बोक्नुभएकी सुवेदी छोरा छोेरीहरुले सबै कार्यालयहरु बन्द रहेको भन्दै कार्यालय नजान आग्रह गरेपनि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भएका कारण सदस्य सस्थांहरुलाई सेवा प्रवाह गर्नु प्राथमिक दायित्व हो भनेपछि बुझेको बताउनुहुन्छ । कार्यालयमा सुरक्षित विधि अपनाएर काम गर्छौ भनेपछि परिवारका सदस्य ढुक्क भएको धारणा उहाँ राख्नुहुन्छ । नेफ्स्कून चितवन फिल्ड कार्यालय अन्तर्गत चितवनका १ सय ७, नवलपुरका ४३ र मकवानपुरको १ गरी हाल जम्मा २ सय १७ वित्तीय सहकारी सदस्य छन् ।
लकडाउनको सुरुमा कार्यालय नखोले पनि फोनमार्फत नियमित सदस्यसँग सम्पर्कमा रह्यौ । दोस्रो पटक समयावधि थप गरेपछि भने बिहान ९ः४५ देखि अपरान्ह ३ बजेसम्म निरन्तर र आवश्यक अवस्थामा ५ बजेसम्म पनि कार्यालयबाट काम गरेका छौं । चितवन फिल्ड कार्यालयमा व्यवसाय विभाग अन्तर्गत ३ जना र टाँडी सदस्य सेवा केन्द्रमा १ जना गरी जम्मा ४ जना कर्मचारीबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं । सदस्य सस्थाहरुले नेफ्स्कून फिल्ड कार्यालयले दैनिक सेवा प्रदान गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना बमोजिम काम गरेकोले उहाँहरु खुसी भएको पाएका छौं ।
सुरुका दिनमा आवतजावतमा स्थानीय प्रशासनबाट केही समस्या हुने हो कि भन्ने भएपनि अहिले त्यस्तो समस्या छैन । चितवनमा अहिले लक डाउन छ जस्तै लाग्दैन । निजी सवारी साधनहरु प्रशस्त चलेका छन् । बन्दाबन्दीमा अन्य वित्तीय सस्थांहरुले दैनिक सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको र बचतको ब्याज दर पनि धेरै कम गरेको अवस्थामा नेफ्स्कूनले नियमित सेवाका साथै ब्याज दर पनि फेरबदल नगरेका कारण अरुको भन्दा राम्रो प्रशंसा पाएको अवस्था छ । यसका अतिरिक्त नेफ्स्कूनले सदस्यहरुलाई बेलाबेलामा दिएको निर्देशन र भर्चुअल तालिमले गर्दा सदस्यहरुले अपनत्व महसुस गर्नुभएको छ । हामी र हाम्रा सदस्यहरुले पनि ऋण असुली र ब्याजमा ताकेता नगर्नुका साथै ब्याज छुट र आकस्मिक र अल्पकालीन ऋण लगानी गरेका कारण समुदायमा संकटको समयमा अन्य वित्तिय संस्था भन्दा सहकारी नै कामलाग्दो रहेछ भन्ने महशुस भएको छ ।
हामीसँग तरलताको अवस्था अत्यन्त राम्रो छ । लकडाउन अवधिमा चितवन फिल्ड कार्यालयमा उल्लेख्य बचत वृद्धि भएको छ भने ऋण असुली पनि त्यत्तिकै राम्रो छ । अहिले हामीले उल्लेख्य ऋण लगानी भने गरेका छैनौं ।
‘फिल्ड कार्यालयद्धारा अभिभावकत्व ग्रहण’
- पेशलकुमार खड्का
फिल्ड इन्चार्ज, भक्तपुर, वागमती प्रदेश
२०४७ साल मंसीर १४ गते ओखलढुङ्गामा जन्मिनुभएका पेशलकुमार खड्का हजुरआमा, श्रीमती र छोरासहित स्थायी रुपमा भक्तपुरमा बसोबास गर्नुहुन्छ । उहाँले ३ वर्ष प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य, ३ वर्ष सञ्चालक समिति सदस्य, १ वर्ष व्यवस्थापक र १५ महिनादेखि नेफ्स्कून भक्तपुर फिल्ड कार्यालय इन्चार्ज गरी करिब ९ वर्ष लामो सहकारी अनुभव हासिल गर्नुभएको छ । कोरोना प्रभावको सुरुका केही दिन आफै र परिवारमा समेत डर र त्रासका कारण समस्या भएपनि कार्यालयको काममा खटिने सन्दर्भमा पछि निरन्तर साथ प्राप्त भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । खड्का आबद्ध भक्तपुर फिल्ड कार्यालय अन्तर्गत हाल १ सय ६० बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सदस्य छन् ।
लकडाउनमा सुरुको १ साता बन्द रहेपनि त्यसपछि दिन र समय तोकी कार्यालय सञ्चालन, सीमित कर्मचारी बाट सेवा प्रदान, सामाजिक संजाल, टेलिफोन र इमेल मार्फत निरन्तर सदस्य संस्थाहरुसँग संचार सम्पर्क ग¥यौं । तर नयाँ थिमि चोक नजिक बैशाख ३१ गते एक महिलामा कोरोना पोजेटिभ देखिए पछि मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको सूचना अनुसार जेठ १ गते बाट ५ दिन पूर्ण रुपमा कार्यालय बन्द रह्यो । तर पनि हामी सदस्यहरुसँग निरन्तर अभौतिक सम्पर्कमा थियौं । बैशाख ११ गतेबाट हप्ताको ३ दिन आइतबार, मंगलबार र बिहिवार बिहान १० बजे देखि २ बजेसम्म नियमित कार्यालय संचालन गर्यौं ।
भक्तपुर फिल्ड कार्यालयमा ५ जना कर्मचारी रहेकोमा इन्चार्जको हिसाबले म आफै अनिवार्य उपस्थिति रहेको र अन्य ४ जना मध्ये २÷२ जनाको दरले साप्ताहिक पालो व्यवस्थापन ग¥यौं । घरमा बस्ने सहकर्मीहरुले पनि दैनिक कामको जिम्मा लिनुभएको थियो । प्रत्येकले ५ बजे दैनिक कार्य विवरण गुगल सिटमा अपडेट गर्ने व्यबस्था मिलाएका छौं ।
महामारीको अवस्थामा समग्र नेफ्स्कून र भक्तपुर फिल्ड कार्यालयले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको भन्दै सदस्य संस्थाबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको पायौं । नियमित कार्यालय संचालनका अतिरिक्त ब्याज तथा हर्जना छुट, निरन्तर स्वास्थ्य शिक्षा, आपतकालिन ऋण सेवा, सदस्यहरुको कोरोना बीमा जस्ता कार्यक्रमका कारण यो समयमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ । घर दैलो बचत फिर्ता सेवा तथा आपतकालिन ऋण सेवा, सदस्य राहतव्यवस्था, स्थानीय तथा सरकारी राहत कोषमा सहयोग जस्ता कार्यले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा सहकारी अबको सारथी बन्ने कुरामा सदस्य र समुदायको विश्वास बढेको लाग्छ ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु हप्ताको एक दिन मात्र खुलेका कारण नगद व्यबस्थापनमा केही चुनौती रह्यो भने स्थानीय प्रशासनबाट पास व्यस्थापन नभएका कारण पनि समस्या भोग्नुप¥यो । त्यस्तै, यस क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरु कुनै बिहान, कुनै दिउँसो खुलेकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको थियो ।
यो समयमा कार्यालयको व्यवस्थापन निम्नानुसार गरेका छौंः
 कार्यालयको भीड र सेवा चुस्तताका लागि फोन समन्वय गरी आउन आग्रह गरिएको
 कार्यालय प्रवेश अघि साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था,
 कार्यालय भित्र स्यानिटाइजरको व्यवस्था,
 काउण्टरमा एक पटकमा १ जना मात्र लाईन बस्ने व्यवस्था,
 कार्यालयमा कोरोना सम्बन्धि सचेतनामुलक सन्देश राखिएको,
 नगदलाई ३ दिन क्वारेन्टाइन गरेर मात्र प्रयोगको व्यवस्था मिलाइएको,
 कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा सामाग्री व्यवस्थापन गरिएको,
 हरेक दिन कार्यालय परिसरमा डीस इन्फेक्सन गरिएको,
 अनिवार्य मास्कसहित मात्र मात्र कार्यालय प्रवेशको व्यबस्था मिलाइएको
यो बन्दाबन्दीले सहकारी सहकारी एकीकरण, प्रविधिको प्रयोग, सदस्य शिक्षा, सुशासन, सञ्जालमा आबद्धता र सहकार्य, प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरीय सेवा, सदस्य केन्द्रित सेवा आदि विषयहरु सिकाएको मलाई लाग्दछ । यी सहकारी सञ्चालनमा अत्यावश्यक भएपनि यो बन्दाबन्दीले तिनको महत्ता थप प्रष्ट पारेको मलाई लाग्छ ।
कार्यालय नियमित खुलेको र संस्थाको माग बमोजिम नगद फिर्ता दिन सकिएकोले धेरै संस्थाहरुबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम समेत नेफ्स्कूनमा जम्मा भएका कारण पर्याप्त तरलता रहेको अवस्था छ । अहिले आपत्कालीन सानो ऋण मात्र लगानी भएको अवस्था छ
‘तरलता मजबुद बनाउनुपर्ने’
- वृजेश गुप्ता
फिल्ड इन्चार्ज, वीरगंज (पर्सा), प्रदेश नं २
२०४८ साल जेठ २० गते बारा जिल्ला, फेटा गा.पा.वडा नं. ३ मा जन्मिनुभएका वृजेश गुप्ता हाल आमा सरोज देवी, भाई दिपेश गुप्ता, पत्नी ममता कुमारी र छोरी अन्शीका गुप्ताका साथ पर्सा, वीरगंज महानगरपालिका, वडा नं. १० मा बस्दै आउनुभएको छ । गुप्ताले बारा र पर्सा जिल्लाका १ सय ४५ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुसँग निरन्तर सहयोग, सेवा र समन्वय गर्दै आउनुभएको छ ।
हामीले बन्दाबन्दीमा फोन सम्पर्कको आधारमा सदस्य संस्थाहरुको कार्यालय गएर नगदको सहज व्यवस्था हुने गरी सेवा प्रदान गर्यौं । यस महामारीमा सदस्यहरु हाम्रो कार्यालयको सेवाबाट सन्तुष्ट भएकोले परिवारबाट पनि राम्रो सहयोग प्राप्त भएको छ । बन्दाबन्दीमा कार्यालयमा साबुन पानीको उचित व्यवस्था, कार्यालय प्रवेश गर्ने सबैले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, कार्यालय प्रवेश पछि सबैले अनिवार्य स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्ने, कार्यालयका अत्यावश्यक बाहेकका समान छुन प्रतिबन्ध, कर्मचारीले अनिवार्य मास्क र पन्जा लगाउनुपर्ने आदि व्यबस्था गरेर चुनौतीपूर्ण कार्यालय सञ्चालनको कामलाई सहज बनायौं ।
चैत्र ११ गतेदेखि चैत्र मसान्त सम्म कार्यालय बन्द रहेपनि त्यसपछि हप्ताको कम्तीमा दुई दिन कार्यालय खोल्यौ र फोन सम्पर्कको आधारमा सदस्यहरु सँग सम्पर्कमा रह्यौ.। नखोलको समयमा पनि सदस्यहरुसँग नियमित सम्पर्कमा थियौं । पछि स्थानीय निकाय र सदस्यहरु सँग सम्पर्क गरी हप्ताको दुई दिन बिहान ११ बजे देखि २ बजे सम्म खोल्यौं । कर्मचारीहरु एक अर्का बीच कम्तीमा ३ फिटको भौतिक दुरी कायम राखेका छौं । न्युन कर्मचारीका साथ कार्यालय व्यवस्थापन गर्यौं ।
सदस्य संस्थाहरुले हाम्रो सेवाको प्रसंशा गर्नुभएको पायौं भने उहाँहरु खुसी पनि हुनुुहुन्छ । यद्यपि, कार्यालयमा सदस्य सँग सम्पर्कमा आउँदा, नगदको कारोवार गर्दा कारोना सर्ने डर भने रहन्छ । कार्यालय जाँदा प्रहरी प्रशासनको अवरोधको पनि समस्या रह्यो । यो बन्दाबन्दीले सहकारी क्षेत्रलाई तरलता व्यवस्थापन उच्च राख्न, महामारीको बेला सुरक्षित तवरले कार्यालय सञ्चालन गर्न, बन्दाबन्दीका बीच पनि सदस्यलाई सेवा दिने सम्बन्धमा धेरै नयाँ उपाय र अवसर प्रदान गर्यौं । हामीसँग तरलता मजबुद बनाउनुपर्ने चुनौती छ । ऋण लगानी गर्ने स्थिति भएपनि नयाँ ऋण लगानी गरेका छैनौं । यस बन्दाबन्दीमा सहकारीको भुमिका अरु बैंक तथा वित्तिय सँस्थाको तुलनामा धेरै राम्रो रह्यो । बैंक तथा वित्तिय संस्था बन्द रहेका अवस्थामा सहकारीले सदस्यलाई घरमा समेत सेवा दिएकोले समुदायमा राम्रो प्रभाव परेको पाएको छु ।
‘सुरुका दिन चुनौतीपूर्ण’
- पवन घिमिरे
फिल्ड इन्चार्ज, इटहरी (सुनसरी), प्रदेश नं १
२०४३ साल चैत १६ गते इलाममा जन्मिनुभएका पवन घिमिरे हाल श्रीमती र एक छोरो सहित इटहरीमा बस्दै आउनुभएको छ । इलाम न.पा ७ स्थायी घर भएका उहाँको सहकारी यात्रा १३ वर्ष पुरा भएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा कार्यालय उपस्थित भएर काम गर्दा समेत पूर्ण पारिवारिक सहयोग प्राप्त गरेको घिमिरे बताउनुहुन्छ । नेफ्स्कून इटहरी फिल्ड कार्यालय अन्तर्गत हाल ३ सय २५ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सदस्य छन् ।
चार जना कर्मचारीमध्ये २ जनाबाट आलोपालो काम गरिहेका छौं बन्दाबन्दीमा । पुरै समय बन्दै गर्नु नपरे पनि संस्थाहरुबाट केही दिन सम्पर्क नभएका कारण कार्यालय बन्द जस्तै भयो । अन्य दिन हामी उहाँहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रह्यौं । केही दिन पूर्व सम्पर्कका आधारमा खोलेपनि पछि भने नियमित साढे १० बजेदेखि २ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । कार्यालय नजिक रहनुभएका सहकर्मीहरुले कार्यालयबाट र अरुले घरबाट सदस्यसँग सम्पर्क र सम्बन्ध राख्ने काम गर्यौं ।
केन्द्रिय संघ भएकाले सदस्य संस्थाहरुले नियमित सेवा र परामर्श अपेक्षा राख्छन् । त्यही कारण हामी प्रायः सम्पर्कमा रहँदै आवश्यकता अनुरुप काम गरेका छौं । यद्यपि, बैंकहरु थोरै समय र खुल्ने नगद कारोबारमा सीमा तोकेका कारण केही दिन हामीलाई समस्या भयो । नयाँ ऋण लगानी नभएका कारण अहिले हामीसँग प्रशस्त तरलताको अवस्था छ ।
कार्यालय सञ्चालनको सिलसिलामा स्यानिटाइजर, मास्क, पन्जासँगै कम्तिमा १ मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने व्यबस्था गरेका छौं । सुरुमा केही दिन कोरोना त्रासको वातावरण सृजना भयो । सेवाग्राहीसँग भौतिक दुरी कायम गरि सेवा प्रवाह गर्न सुरुमा पक्कै चुनौती रह्यो । नगद गणना र व्यवस्थापनमा केही त्रास भएपनि पछि सुरक्षित विधि अपनायौं ।
यो बन्दाबन्दीले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, अन्तर सहकारी समन्वय, सदस्यहरुसँग जीवन्त सम्बन्ध र सेवा विविधिकरण गरी ऋण प्रवाह गर्न सिकाएको छ । यो समय सहकारीको सेवा अत्यन्त प्रभावकारी बनेको छ । सदस्यहरुसँग घरैमा गएर भेट्ने अनि सहयोग गर्ने अग्र मोर्चाको सेवा प्रदायक संस्था हो सहकारी भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यति मात्र होइन, सदस्यहरुले आफ्नै संस्था भएकाले सम्मानपूर्ण व्यबहार पाएका छन् भने अन्य वित्तीय संस्थाले अधिकांशलाई ग्राहकको रुपमा कारोबारको हदसम्म मात्र सम्बन्ध राखेको कुरा यो बन्दाबन्दीमा झन् प्रष्ट भएको छ ।
के हो ? अन्तर सहकारी कारोबार ...
२०७७ जेष्ठ २४ गते , शनिवार
नेफ्स्कूनका ‘फ्रन्टलाइनर’हरु –२ ...
सहकारीमा युवा :सम्भावना धेरै, अवसर न्यून ...